Posted on October 14, 2020 by Durga Panta
कोही इस्लामधर्मी या इसाइधर्मी नै छन् भने पनि त्यस्ता व्यक्ति पितबस्त्र धारण गरेर मन्दिर चाहार्न सक्दैनन्, तर ती राष्ट्रवादी–देशभक्त छन् भने गौरवका साथ अफूलाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभ्याउन सक्छन् । २०७८ को जनगणनालाई हिन्दूत्वविरुद्ध नभइ नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव रुग्ण बनाउने उद्देश्यका प्रति लक्षित छ । एकतावद्ध भएर जनगणनालाई नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा उपयोग गर्न सकेनौँ भने अफगानिस्तानले झैँ हामीले पनि दशकौँसम्म रोइरहनुपर्ने छ । देश बाँचे मात्र आफ्नो पहिचान जोगिने हो, देश नै नजोगिए त्यसपछि पहिचान खोज्न कहाँ जाने हो ? त्यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको पहिचान रक्षाका निम्ति सम्वेदनशील घडी आइपुगेको यथार्थलाई आत्मसात गरौँ र, जनगणनाका क्रममा हुँदै गरेको पराया षडयन्त्रलाई परास्त गरौँ, जय मातृभूमि ! घटना र विचारबाट